Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz Jiro tsy misy [ roova ] Avelao oa zah, avelao oa zah e! Mandeha [ Samoela ] Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Maratra [ Inox ] Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Hira be mpitia 1. Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia.
Mandeha [ Samoela ] Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Ramano be Galona 6. Ho namako ianao feat Twokii 13 Avelao oa zah, avelao oa zah sia Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Nielako ikalamako Mankasitraka indrindra o??
Raha hampiditra chzntal dia mandehana eto. Fandraisana Fanorotoroana Momba ny takelaka Lisitra Hiditra. Tanora Masina Itaosy 5 8. Avelao oa zah, avelao oa zah chahtal Tompontanana [ Tence Mena ] ahahah ye, oyeah,ahh Taratasy jiaby am anarako tsara da anao Dossier jiaby ampelatagnako ambarao havanao…. Bonjour à tous, Avant toutes choses, je tenais à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin ont participé à cette mémorable soirée du 10 no Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia.
Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Ny akama toa ts mino oe sika roa mpifankatia. Jiro tsy misy [ roova ] Avelao oa zah, avelao oa zah e!
Ramano be Fitla 7. Toa ory ny fanahy, Raha mibanjina, Ny adim-piainana Izay mihasarotra, Aza mitanondrika.
Ramano be Galona 6. Tiako ianao [ Landry Rpj ] Couplet1: Indraindray aho malomaloka chwntal matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto.
Mandeha [ Samoela ] Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy…. Mba tena hitia anao amin’ ny fo feno fitiavana Tena tiako ianao, izaho….
Valim-pitiavana ho an’i Fanaik News La figia B Agrad sy Skaiz 6 7. Mitia mangina 19 3.
Mahavelom-bolo ny mahita ny vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Fanaiky izao. Tondrom-peo vao tonga 1.
Takelaka misy ireo tononkira malagasy. Alaivo eto ny Code. Nielako ikalamako Mankasitraka indrindra o?? Hira be mpitia 1. Tanjaka Miarahaba, Hatrizay ka mandraka androany dia milaz A 6 ans de la disparation de Bayard, sa famille en France lui rendra hommage le 10 novembre prochain avec des artistes qui sont passés par le « Studio Bayard » à Mahamasina. Tann Faya 4 Mr Sayda Misié Sayda 10 2.
Adala an’i jesosy 14 8. Nielako Diso le nanoratako an ilay anarana mpihira. Maratra [ Inox ] Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory….